Giro Savant enwere MIPS? - Nyocha
Isi > Nyocha > Giro savant mips review - kacha ndu
Giro savant mips review - kacha ndu
Giro Savant enwere MIPS?
IheGiro Savant MIPSna-enye gịMIPSteknụzụ na oke ibu dị na okpu agha. Ma ikuku ikuku adịghị mma dịka ụfọdụ ndị asọmpi na eriridịa bit obosara na stiif.
Ndewo, nke a bụ Jeffrey si MTB.guide ma taa bụ oge iji nyochaa Giro Cinder MIPShelm. Nke a bụ nwanne nwoke nke okpu agha Synthe dị elu na-ewu ewu nke na-enye ọtụtụ atụmatụ na ọnụọgụ ego.
Na MIPS ọ na-abụwanye ọkọlọtọ maka okpu agha, a ka enwebeghị nnwale nyocha. Na ee eeh na-akwadoghi m were otu maka ndị otu na nke a.
Mana tupu anyị abanye na nke ahụ, ka anyị lebakwuo anya na Giro Cinder MIPS. May nwere ike ịnọ na-eche ihe kpatara okporo ụzọ? Okpu agha dị na ọwa igwe kwụ otu ebe. Ọ dị mma, n'ịgba ọsọ mba, ọ ka dị mma ikpu okpu ụzọ, yana iyi akwa lycra dabara adaba.
Ekwesịrị m ikweta na m na-agba ịnyịnya ígwè m mgbe ụfọdụ. Site n'ụzọ, ka anyị lelee ụdịdị ahụ. Giro Cinder na Ember Mips bụ nwanne nwoke na nwanne nke Giro Synthe MIPS.
Ebe ebutere Cinder ka okpu agha nwoke, Ember ka ejiri mee Ember dị ka okpu agha ụmụ nwanyị yana ụmụ nwanyị naanị ihe ịchọ mma iji gosi ọdịiche anyị. Anyị ga-echekwa ụfọdụ ụgwọ iji belata ọnụahịa nke euro 270 dị mpako maka Synthe na euro 150 nwere ezi uche karịa Cinder. Mana ọ bụrụ na i lee ntụnyere a anya, ọdịiche dị iche dịka ị ga-atụ anya ya. (Lelee njikọ dị na nkọwa maka ọnụahịa dị ugbu a) Eleghị anya, otu n'ime esemokwu dị ịrịba ama na ịkpu okpu agha bụ ibu, Cinder dị ihe dịka 20% karịa, mana a ka nwere ike iwere ya dịka okpu ọkụ, dịka ọ na-azọrọ ma na-atụ 295 ugbu a. gram maka okpu na-ajụ ọkara.
Ihe cinder dịkwa ntakịrị na usoro nke nhazi na nsọtụ ya. Usoro Roc Lok 5 dị obere ma dịkwa ntakịrị nụchaa ma e jiri ya tụnyere sistemụ RocLok Air nke Synthe ka nwere bọtịnụ n'azụ okpu agha ahụ iji mee ka ọ dị mma okpu agha nwere ike iji otu aka mee ya. Okpu agha abụọ ahụ nwere mpempe akwụkwọ mbughari ị nwere ike ihicha ma tinyeghachi na mpempe Velcro.
Aka ekpe maka cinder bụ ọdụ ụgbọ mmiri ịchekwa maka ugogbe anya maka anwụ na nke a nwere ike bụrụ ihe mgbagha ụfọdụ maka ụfọdụ. Igwe okpu agha abụọ a bụ EN1078 gbaara agba, nke bụ otu ihe kachasị mkpa nke okpu ọ bụla kwesịrị ịnwe ma ọ dịkarịa ala iji nwee ọkwa MIPS bụ nchedo ọzọ nke na-ebelata ikike ntụgharị na ọnọdụ nke mmetụta ọ bụla na-ebelata ihe egwu ahụ nke mkparịta ụka. Mana anabataghị ule MIPS na usoro asambodo okpu agha, nke pụtara na ịdị irè nke mmemme mmebi ike a nwere ike ịdị iche iche.
Anaghị m ekwu na MIPS dị njọ, ana m akwado mgbalị ọ bụla iji mee okpu agha ka ọ dị nchebe, na mgbe ị na-ele anya otú o si arụ ọrụ, ọ dị ka ọ doro anya na ọ nwere ike ịdị oke irè. Ma na-enweghị ọkwa nnwale nnwere onwe dị n'ihu ọha iji tụnyere ma gosipụta ịdị irè ya, enwere m obi abụọ. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na Giro Cinder MIPS a, ịnwere ike iji mmemme nnọchi okuku na okpu okpu Giro ruo afọ 3 mgbe ịzụrụ ego.
Ego ahụ na-abụkarị 50% nke ọnụahịa ahịa. Anyịnyawo okpu agha a na ụzọ ụkwụ n'oge ọkọchị ma mee ya na okpomọkụ dị nso na oyi - ọfụma? Ọfọn, enwere m mmetụta na enwere ikuku ikuku n'ime okpu agha ahụ, ọkachasị n'elu okpu agha ahụ, enwere m mmetụta na oyi akwa MIPS na-egbochi ụfọdụ ikuku; Achọpụtara m na padding ahụ dị ezigbo mkpa, mana ọdịdị, ndozi na usoro dabara adaba nke okpu agha ahụ enweghị nsogbu a. Chekwa ugogbe anya dị na okpu m abụghị ihe m na-eme oge ahụ, mana achọpụtara m na ọ bụ ntakịrị ihe na-ewe iwe na enweghị m ebe ọ bụla m ga-etinye enyo anya m ma ọ bụrụ na ha kpuchie anya ugogbe anya maka anwụ gị na mbara ikuku, mana ha anaghị ejide nke ọma na vents, ma ọ bụrụ na ọ bụla.
A leeway nwere iji ugogbe anya anwụ buru ibu yana Cinder abụghị nsogbu m. Site na Oakley jawbones dị ka ọkọlọtọ ruo na ụdị ndị buru ibu dịka Jawbreakers na Speedcrafts, ha niile na-abụkarị ihe dabara adaba, nwee ohere zuru ezu. Achọrọ m ịlele ngwaahịa a maka nyocha ndị a, ewezuga akụrụngwa nchekwa maka ebumnuche doro anya.
Otú ọ dị, mgbe m jiri ọnwa 6 mee ihe, aghaghị m iji okpu a n'ihi ọgba aghara dị egwu nke na-adaba na njikwa ahụ n'ime olulu mgbe m zutere onye na-agba ịnyịnya n'okporo ụzọ m. Okpu-agha ahụ mebiri ntakịrị, mana okpu agha ahụ dọwara m ma jiri nnukwu nsogbu kụrụ onwe m. MIps oyi akwa na-ebelata ihe ize ndụ nke mgbagha, ma ọ dịghị ewepụ ya kpamkpam.
Dị ka okpu agha niile, ọ na-ebelata ihe egwu dị egwu. Mmechi Cinder MIPS bụ okpu nke dị n'etiti na-adịghị anya site na akwa mkpuchi dị elu na-ewepụ. Ee, Synthe bụ okpu agha ka mma, ọ dabara nke ọma, ọ dị mma karịa, nwee ikuku ka mma na njedebe ka mma.
Ma ka ọ ka mma maka euro 150? Ọ bụrụ n’inwere ego imefu na okpu agha ahụ dabara nke ọma, ọ bụ ikuku, mana ọ bụrụ na ọ bara uru karịa maka ego ị na-achọ, mgbe ahụ ntụ bụ nhọrọ kacha mma.
Ọdịda nke nwere okpu agha na mmerụ ahụ apụtaghị na okpu agha adịghị mma Ọ bụ ezie na echere m na Cinder (na okpu agha n'ozuzu ya) nwere ike ichebe isi gị nke ọma, ihe niile na-agbadata na mberede, ọ bụrụhaala na usoro nyocha na nyocha dị n'azụ, nke a ga-mwute ikwu na ọ ga-abụ nsogbu ịdị ka nke a nwa oge. Ọ bụ ya mere na anaghị m enye Cinder akara ọjọọ maka ule ọdịda ahụ. Họrọ okpu agha bụ nke onwe gị mgbe niile ma ana m akwado ịnwale okpu agha.
Ọ bụrụ na Giro adịghị adaba nke ọma, m ga-akwado ilele Bell Stratus MIPS, nke dịkwa na ọnụahịa ọnụahịa dị ka Cinder ma nwee ihe dị iche iche dị iche, n'ezie, nwere ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ ịhọrọ. Ngwunye okpu agha kwesịrị ịbụ ihe kacha mkpa, ọnụahịa na mma. Daalụ maka ịlele nyocha m nke okpu agha Giro Cinder MIPS.
Ọ bụrụ na isiokwu ahụ masịrị gị, biko pịa bọtịnụ Dịka wee tụlee ịdenye aha ma ọ bụrụ na ịnweghị. MTB.guide na-ewetara gị nyocha ngwaahịa, otu-tos, na isi ihe ngosi.
Nwee ọmarịcha ụbọchị ma hụ gị oge ọzọ.
Giro Savant okpu igwe MIPS?
Inye akwa dị mma, arụmọrụ dị larịị ma bulie eluMIPSnchekwa technology, naOkpu agha MI MI MIana achi achi na-adịgide adịgide nkasi obi gị niile agafe, ọbụna mgbe ị inupụ ijeụkwụ.
(egwu dị egwu) - Mkparịta ụka na-abụkarị mgbagha nke ụbụrụ ụbụrụ na ọkpụkpụ okpokoro isi. Mana n'ọtụtụ oge ọ naghị agwa gị ebe ị merụrụ ahụ - Ọ bụrụ na ị zụtala ma ọ bụ chee okpu ọhụụ ọhụụ n'ime afọ ole na ole gara aga, ọ ga-abụ na ị hụla ihe a na-akpọ MIPS. MIMPS bụ ngwa ahịa nke ebidoro n’afọ 2007.
Ma kemgbe ahụ rere ihe karịrị nde itoolu nke ngwaọrụ ha. Ma gịnị bụ MIPS? Gịnị ka e mere ya? Kedu ka esi mepụta ya? Akpọrọ m ebe a, Sweden, iji chọpụta nke ahụ kpọmkwem. (soft electronic music) Dị ka ndị na-agba ịnyịnya ígwè, ọtụtụ n'ime anyị enweela ihe ọghọm ma ọ bụ nwee ihe ọghọm n'ọdịnihu, nke ahụ gụnyere m.
Ọ bụ ezie na pasent 10 agafeghị oke na ndị ọzọ nwere nnukwu mmerụ ahụ. A na - etinye akụkụ ndị a niile na mkparịta ụka na - enweta nzaghachi site n’aka ndị ọgbọ gị, ma ọ bụ ihe ọ bụla ị nwetara mgbagha, ọ naghị ekwu ọtụtụ ihe. Cussgba aghara nwere ike ịdị na-ama jijiji n'ụbụrụ gị ụbụrụ na ọkpụkpụ okpokoro isi.
Onye m ga-ajụ ụfọdụ ajụjụ siri ike taa, olile anya y. Ma chọta azịza ole na ole m amaghị. So Peter, gwa m okwu banyere mmalite MIPS? Kedu ụbọchị mbụ Kedu ụdị nke ahụ dị? - Ọfọn, ọ malitere mgbe mbụ m zutere Hans Van Holst, onye dọkịta na-awa ụbụrụ, ọ jụrụ m ma m chọrọ ịme PhD, na ejighị m n'aka na m chọrọ, mana agwara m Hans na m mere ' Aga m anwa.
Otu esi anwale okpu agha anyị, ma ọ bụ otu anyị si ada igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ ọgba tum tum ay. A na-anwale okpu agha naanị maka ọdịda dị ọcha. Naanị linia osooso.
Anyị ghọtara ozugbo, nke ọma, anyị nwere ihe dị ukwuu banyere echiche a nke nwere ike belata ikike ntụgharị nke a na-ebutefe n'ụbụrụ gị. N'ihi na ụbụrụ gị na-enwe mmetụta nke ntụgharị. You ga-enweta ntụgharị ahụ gị mgbe ị dara n’ala n’akụkụ ya.
uru nke green smoothies
N'ihi ya, ọ bụ ụzọ e si edokọkọta iberibe ihe. Na ozi a gwara banyere ya. Site na nke a anyị ghọtara na ọ bụ nnukwu, nnukwu echiche ma anyị nwere ike ịme nnukwu mgbanwe.
Ma belata ọnụ ọgụgụ nke mmerụ ahụ. Ikwuru ihe a na-akpọ rotational motion taa. Anụtụbeghị m okwu ahụ.
Kedu ihe bụ mmegharị ntụgharị? Kedu ihe ngwaọrụ dị ka nke ị mepụtara ma mee iji belata mmerụ ọ na-akpata? - Echere m ịghọta ntụgharị nke ị nwere ike iwere onye ọkpọ ahụ dịka ọmụmaatụ. Nwere ike iguzo na-eti onwe gị ụta mgbe ị gbasịrị ụkwụ site na ọkpọ ụkwụ. Ma na mberede, ha ga-enweta ngwe elu, ha ga-enweta ntụgharị ya.
Ma na ha na-kụtuo. Yabụ isi na ụbụrụ mmadụ na-enwe mmetụta nke ọma na ntụgharị a karịa usoro usoro, yabụ ikwu okwu, ala n'akụkụ, okpu agha na-egwu ala, ị ga-enweta ntụgharị okpu a. Ma ebe ọ bụ na ndị agha dị oke elu, okpu agha ahụ na-enyefe ntụgharị a na isi.
Ihe anyị na-eme na okpu MIPS bụ na anyị nwere akwa mkpuchi nwere ike ịgafe n'akụkụ niile, 10 ka 15 millimeters. Ya mere, anyị na-e imomi n'ezie na ị na-ada na ice. Yabụ mgbe ị dabara na ice isi na-aga n'ihu na ntụziaka ọ kwesịrị ịga ma na-agbagharị, nke ahụ bụ ihe anyị nwere n'akụkụ oyi ahụ, yabụ anyị nwere ọnụọgụ dị oke ala nke esemokwu ahụ n'etiti mkpuchi ahụ na okpu agha ahụ.
Na mgbe ahụ anyị na-emegharị ume site na ntụgharị gaa ntụgharị, yabụ anyị belata mbughari ntụgharị na isi na ụbụrụ. (mild electron ic music) - Ogologo oge ole ka o were iji nweta ụdị ị na-eji ugbu a? Are na-emepe emepe mgbe niile maka atụmatụ ọhụụ n'ọdịnihu? Ma ọ bụ nke a bụ imewe ugbu a nke ga-arụ ọrụ ruo mgbe ebighị ebi? - Anyị na - emepe emepe ka na - arụ ọrụ ọhụụ. Anyị ka na-amụ banyere ọnya isi.
Dịka ọmụmaatụ, mgbagha bụ mmerụ ahụ bụ naanị aha maka mgbaàmà. N'agbanyeghị nke ahụ, a ka nwere ọtụtụ nyocha a ga-eme iji ghọta kpọmkwem ihe na-emebi ụbụrụ. Mana naanị otu ihe anyị maara taa bụ mgbagha a na mmerụ ụbụrụ ndị ọzọ dị njo kpatara mgbaghari a nke isi.
Na ihe anyị na-eme, naanị ihe anyị ji okpu MIPS na ngwaahịa MIPS dị iche iche eme bụ na anyị na-ebelata ike ntụgharị nke a na-ebufe ya n'ụbụrụ mgbe anyị amaghị kpọmkwem ike m na-akụ gị ga-emerịrị ị ga-enweta mgbagha. Anyị maara na obere mmetụta dị mma maka isi gị na ụbụrụ gị. Nke ahụ bụ ihe anyị na-eme na MIPS okpu agha (egwu kọmputa) - Amaghị m nke ọma ma m kwesịrị ịkọwa ụlọ a dị ka ụlọ nyocha nyocha, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ime ụlọ arụmọrụ.
Maka ilele nke a, ha nwere ihe niile ịchọrọ iji zụọ MIPS. nri ehihie na-agbaji ọzọ. Enwere oche bench.
Have nwere ụdị stepper, igwe akwọ ụgbọ. Ma na e nwere ibu nke itule mbadamba na mgbatị bọọlụ. Ọtụtụ eriri.
Mgbe ahụ ihe kachasị mkpa, nke ahụ bụ igwe kwụ otu ebe, ha nwere ọnụ ụlọ ebe ahụ juputara na igwe kwụ otu ebe, ọtụtụ igwe kwụ otu ebe, na mgbe ị mechara ọzụzụ na MIPS enwere ụlọ dị jụụ nke ị ga-agarịrị gaa. Enwere naanị otu ebe ị ga-aga. Nke a bụ ụlọ ịhịa aka.
Ọ dị abụọ ruo anọ, ya mere, abịara m ntakịrị n ’ụbịam maka elekere anọ. Mana enweghị m ike ichere ịhịa aka. (soft electronic music) E nwere a zuru ụwa ọnụ MIPS ule center ala n'ebe na m na-aga gbadata na izute isi nke ngwaahịa mmepe, Marcus Seyffarth, ọwa ule protocol, na ọ na-aga na-egosi kpọmkwem otú o si arụ ọrụ, na o doro anya na ọ na-aga na-eji isi nke na-eme anwansi yiri nke m n'ọdịdị na nha. (egwu elektrọn dị nwayọ) Ọ dị mma, a nọ m n'ụlọ nyocha ugbu a.
O doro anya na ọ bụ nha, nke ọma, ọ bụ nha, ọ bụ isi 58cm, ọ bụghị ya. Nke ahụ bụ isi m nha naja. N’okwu a enweghị m ike ikwenye etu olu m siri sie ike.
N'ihi na nke ahụ adịghị mfe, ọ bụ? - Nke ahụ bụ 42 n'arọ. - Nri. - Anyị nwere isi nyocha dị iche iche maka okpu agha dị iche iche s n'ezie anyị nwere ọkara nha, anyị nwere ogo nwata, nnukwu nnukwu.
Anyị ga-enwe obere ngwa ọrụ a iji hụ na ọ dabara nke ọma dịka nkọwa nke okpu agha ahụ. Okpu agha ọ bụla nwere nkọwa maka ogologo ahụ. Mgbe nke ahụ mechara, jidesie usoro ahụ ike, tinye ya na bench ule.
Ozugbo m nwere ọgụgụ, nọmba m chọrọ ịnwe, m na-adọkpụ aka na lever nke na-ejide isi na okpu agha ebe n'oge ọdịda ọdịda na-emetụta tupu oge. Mgbapụta nke tọhapụrụ bụ naanị 50 cm n'elu anvil. Mgbe ahụ ọ nwere ike ịga.
Gbanyụọ kọmputa. Pịa bọtịnụ ka ị bulie ya wee dobe ya ọzọ. (egwu egwu dị egwu) - Ọ dị mma, ule ahụ gafere ebe ahụ, nsonaazụ ya dịkwa ebe a, nri? - Eeh.
Echere m, ebe ọ bụ na anyị bụ isi na-ebugharị ike, ụgbọelu na-amị amị, MIPS, ị ga-enweta ike, kama ị ga-awụlikwa elu, ị ga - enweta - ee, yabụ na ị gaghị eche ya n'isi gị ma ọ bụrụ mere nwere ihe ọghọm You nwekwara ike ịhụ na ọ dị obere njọ. Ejiri usoro gị tinye ike gị niile - ee, ọfụma. (egwu elektrọniki dị nro) - I chere na enwere ozi na agụmakwụkwọ zuru oke banyere mmetụta nke mgbagha na ụbụrụ merụrụ site na ịgagharị? - Ihe kachasị mkpa bụ na ndị mmadụ na-eyi okpu agha.
Ya mere, m na-ekwu, nke ahụ bụ ihe kachasị mkpa. Na ị nwere okpu agha mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-akwọ ụgbọala na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-adịghị anya.
Anyị nwere ike ịhụ na ọtụtụ ma ọ bụ ọtụtụ ihe ọghọm maka ndị dị mkpụmkpụ n ị na-aga ahịa ma zụta ihe ọ bụla. Tinye okpu agha. Ana m eji okpu agha kwa ụbọchị.
Ọ dị ka mgbe ị gbanyere belt na ụgbọ ala. Ọ na-aga n'ekwughị m. Na mba ndị ọzọ na Europe, okpu eji eme ihe abụghị ihe a na-ahụkarị na Sweden.
Na echeghị m eche maka mmegharị ntụgharị maka nke abụọ. Ihe m anụtụbeghị ruo taa. Ma ugbu a ka m ghọtara na mgbe anyị nwere otu n’ime ihe ọghọm ndị a, nke a bụ n’ezie ihe na-emebi ụbụrụ anyị. (egwu electronic dị egwu) )wa snow a na-emegharị mmegharị ntụgharị nke a na-ebute na ụbụrụ.
A na-anwale ọtụtụ okpu agha site na ịnwale ule dị ka nke a. Ọ bụrụ na i leba anya na mbara igwe snow, ị ga-ahụ na snow ahụ emegharịghị. ntụpọ Cheedị na nke a bụ ụbụrụ gị ugbu a ma anyị na-anwa ịme ọsọ ọsọ na akaụntụ. ka anyị na-enweta ya na anyịnya igwe.
Mgbe ahụ ị ga-amalite ịhụ mmetụta nke ihe ọghọm ma ọ bụ ihe ọghọm dị otú ahụ. Ọ bụ ya mere eji mepụta usoro MIPS. Emere ya iji belata mmetụta na igbochi mmerụ ụbụrụ.
Ọ bụrụ na ị mụta ihe ọ bụla, nye isiokwu a isi mkpịsị aka taa. Maka ederede ndị ọzọ pịa ebe a n'okpuru.
Gịnị bụ MIPS okpu agha?
MIPSna-anọchi anya Multi-directional Mmetụta Nchedo System, nke bụ a na-eduga ileghara-ụgbọelu technology n'imeokpu aghaEzubere iji belata ikike ntụgharị nke nwere ike ịpụta site na ụfọdụ mmetụta.
Ichoro MIPS n’ezie?
Isi na okpu agha ya naMIPSga-agbagharị na-erughị isi na okpu agha na-enweghịMIPS. Ya kpataraanyị kwesịrịiheMIPSakwa iji nwee ọnụọgụ dị oke ala iji belata ntụgharị nke isi.1. 1. 2020.
Kedu ka m ga - esi mara ma okpu okpu m nwere MIPS?
.B.MIPS- enwetaraokpu aghayiri ka ọ dị ka onye na -MIPS- enwetaraokpu aghama e wezụga n'ihimgbe oleị lee anya n'ime, ị ga-leea mkpa odo liner n'okpuru pad. Site n'èzí, naanị egosi naokpu aghabụ ihe ọ bụla dị iche iche na otu enweghịMIPSbụ na ụfọdụ ụdịnweeobere odoMIPSlogo na ebe ahụ.
Ego ole bụ okpu igwe Giro Savant MIPS?
MIps liner nwere oghere ndị nwere oghere kwekọrọ na oghere 25 dị na ahụ okpu agha. Naanị ya na - enye gram ole na ole na okpu agha 286g zuru oke, nke nwere ezi uche maka okpu agha na ọnụahịa ego a. & gt; & gt; Na-agba mbọ ịpụ n'ụlọ ahịa. Buyzụta ọhụrụ nke cgba ígwè kwa izu ebe a, ma ọ bụ na-agbalị 6 mbipụta naanị £ 6 & lt; & lt;
Giro Savant ọ bụ okpu agha awara awụ?
A na-eme usoro MIPS ka ọ na-amị n’agbata isi na okpu agha ma ọ bụrụ na ọ daa. Giro na-amụba okpu okpu agha aero, ma Giro Savant, nke dị na akara maka afọ ole na ole, na-ejigide ụdị ụzọ eji agba ụzọ.
Kedu otu oghere dị na okpu MIPS?
MIps liner nwere oghere ndị nwere oghere kwekọrọ na oghere 25 dị na ahụ okpu agha. Naanị ya na - enye gram ole na ole na okpu agha 286g zuru oke, nke nwere ezi uche maka okpu agha na ọnụahịa ego a.